ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်, ဖန်မျှင်ထည်အဝတ်အစား, ဖန်မျှင်ထည် Net က, EIFS ကွက် - က Grand
Drywall တိပ် & အမျိုးမျိုးသောတိပ်
ပြင်ပက Wall ခေါင်မိုး & window ကို
ရေချိုးခန်း။ ရေချိုးခန်း & မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်
ဘက်ပေါင်းစုံသံမဏိအိမ် & Contaienr အိမ်
ပြင်ပက Wall & ခေါင်မိုး & Window
A1 - ဖန်မျှင်ထည်ကွက်
A2 - အင်းဆက်ပိုးဖန်သားပြင်
B1 - ကိုယ်ပိုင်ကော်ဖန်မျှင်ထည်တိပ်
B3 - သတ္တုချွတ်တွေနဲ့ထောင့်စက္ကူတိပ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-574-87808408
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-574-87802848
E-mail ကို: sylvia@fibreglassmesh.com
E-mail ကို: grandco@vip.163.com
ဖက်စ်: + 86-574-87803039
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, အီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါနဲ့ကျနော်တို့ 24 နာရီအတွင်း reply ပါလိမ့်မယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မီးကိုထပ်သတိပေးလိုက်သည်: ကြိမ်မြောက် ...
ပြဿနာများကဒီမတော်တဆမှု casue: 24-ပုံပြင်တိုက်ခန်းများ၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ 2016 ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်, ထို Associated Press reported.Greg လက်, ဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနှင့် Philip Hammond က, excheque များ၏အဓိပတိ ...